Ciidamada Dowladda Iyo Amisom oo howlgal ka wada wadada xiriirisa Black Sea ilaa Baar ubax | Baydhabo Online
Ciidamada Dowladda Iyo Amisom oo howlgal ka wada wadada xiriirisa Black Sea ilaa Baar ubax
Ciidamada Dowladda Federalka Somaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee Amisom, ayaa waxa ay howlgal ka wadaan wadada xiriirisa Isgoysyada Baar Ubax iyo Black Sea ee Degmada Howlwadaag, sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka.
Howlgalkaan oo biloowday Barqadii maanta ayaa ciidamada Amisom iyo kuwa Dowladda waxa ay ku hakiyeen dhaqdhaqaaqi gaadiidka wadadaasi isticmaalayay.
Dadka deegaanka ayaa sheegay ciidamada inay baarayaan guryaha u dhaxeeya Isgoysyada Black Sea iyo Baar Ubax, iyadoo aanan si rasmi ah loo ogeyn halka Bartilmaameedka uu yahay ee ciidamada ay Baarista ka wadaan.
Qof ku sugan Xaafadaha howlgalka uu ka socdo, ayaa Dhacdo.com u sheegay in ciidamada ay guryaha gudaha u galayaan, kadibna Baaritaan ay wadaan, balse lama sheegin ilaa hada cid ay ciidamada Amisom iyo kuwa Dowladda howlgalkaasi ku soo qabteen.
Howlgalada qorsheysan ee sidan oo kale ah ayaa inta badan ah kuwa Bartilmaameed ah oo ciidamada ammanka ay ku Bartilmaameedsadan guryo ay ka heleen macluumaad ku aadan Xubno Shabaab ka tirsan inay ku sugan yihiin.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale, ayaa shalay sheegay inay socdaan qorshooyin lagu xaqiijinaayo ammaanka Magaalada Muqdisho, sidoo kalena looga hortagaayo falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka oo Shabaab ay ka geystan Magaalada.